आज सेयर बेच्नेहरु चार वर्षपछि पछुताउने छन्, किनेर बस्ने मानिसहरु खुसी हुनेछन्- मनोज ज्ञवाली  BikashNews
२०७४ फागुन २१ गते १०:३० विकासन्युज
मनोज ज्ञवाली, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड
सौहार्दपूर्ण वातावरणमा रोटी बाढेर खाने अवस्था बनाउन सकिन्छ ?
रोटी बाढेर खाने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । बैंकर्स एसोसियसन छ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन पनि छ । हामीले सँगै बसेर सहमति गर्न सक्छौं । एउटा लेभल भन्दा माथी नजाने भनेर निर्णय गर्न सकिन्छ । छीना झम्टी नगर्ने, सहमतिमा निक्षेप लिने जस्ता काम गर्नु पर्ने थियो । अहिले त निक्षेपको तानातान मात्रै होइन, कर्मचारीको तानातान पनि अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ । यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रलाई नै समस्यामा पारिरहेको छ ।
पढेलेखेका र उत्कृष्ठ मान्छेहरु रहेको भनिएको वित्तिय क्षेत्रमा पनि आफैंले तय गरेको लक्ष्य पुर्याउन नसक्ने, किन ?
मान्छेले व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा काम गर्ने हो । आज बैंकका सीईओहरुले राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन् । बैंकरहरु व्यवसायिक भएनन् । हामीले ८ प्रतिशतमा घरका लागि ऋण दिने अनि अर्काे महिनामा १६ प्रतिशत पुर्याइदिएका छौं । ऋणको आम्दानी बढेको हुन्न अनि उसले ८ प्रतिशतको ऋणलाई १६ प्रतिशत बनाउँदा कसरी तिर्न सक्छ ।
के हामी बैंकरहरुमा इमान, जमान हुन्न ? हामीलाई नैतिकता भन्ने कुराले छुनु पर्दैन् । यति बेला हामी बैंकरहरुले ऋणको जोखिम लिन पनि छाडेका छौं । ऋणीहरुलाई धमाधम ब्याजदर बढाएर आफू सुरक्षित भैरहेका छौं । सबै क्षेत्र ओरालो लाग्दा पनि बैंकहरुले नाफा बढाईरहेकै छन् । हामी ब्याजदरमा ऋणीलाई दुःख दिईरहेका छौं ।
तर डायनोसर बन्ने चाहाना मलाई छैन । त्यसैले २८ वटा बाणिज्य बैंक र दर्जन जति राष्ट्रिय स्तरका बाणिज्य बैंकहरुको भिडमा रहेकाले मैले पनि एसएमएस पठाएर ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि आजसम्म कर्जाको ब्याजदरमा हामीले कुनै पनि ग्राहकलाई अप्ठेरो पारेका छैनौं । तैपनि हामी डायनोसर बन्न चाँही तयार छैनौं । रुख अग्लो बन्दै गयो भने घाँटी लम्ब्याउँदै जाने जिराफ नै बन्ने हो । म जिराफ हुन चाहान्छु । अहिले हाम्रो बिजनेशको आकार राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुको बटम लाइनमै छ । त्यसैले हामी पनि जिराफ बन्ने बाटोमा लागेर केहि न केहि ब्याजदर बढाउने काम नै गरिरहेका छौं ।
वित्तिय क्षेत्र भने साह्रै संवेदनशिल छ । एकाध बैंक ओरोलो लागे भने धेरै बैंक माथी समस्या आउछ । त्यसकारण हामीले, विकास बैंक र बाणिज्य बैंकहरुका सीईओहरुले सँगै बसेर वित्तिय क्षेत्रको वास्तविकताको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । व्यवसाय र नाफाबारे एउटा स्पष्ट धारणा बनाएर आ-आफ्ना सञ्चालक समितिमा सोही अनुसारको कुरा राख्नुपर्छ ।
तपाई कामु सीईओ हुुनुहुन्छ र सीईओ बन्ने लाईनमा हुनुहुन्छ । चार वर्षपछि ज्योति विकास बैंक कुन पोजिसनमा पुग्छ ?
म डेपुटी सिइओ थिए, अहिले एक्टिंग सिइओ छु । म सपना बोकेर यहाँ आएको हुँ । हिजो पनि काम गरेको हुँ र आज पनि काम गर्छु । नयाँ सिइओ आउनु भयो भने पनि यति स्पीडमा काम गर्ने हो ।
आजका दिनमा ज्योति विकास बैंक एक ढिक्का भएर काम गरिरहेको छ । बोर्ड देखि उच्च व्यवस्थापन र सबै कर्मचारी एकजुट छन् । हामी उच्च मनोबलका साथ बैंकलाई अघि बढाईरहेका छौं ।
हामीलाई व्यवसाय बढाउन ठूलो चुनौती छ । गत वर्ष हामीले शत प्रतिशत व्यवसाय बढाएका छौं । ६ अर्बको कर्जालई १३ अर्ब बनाएका हौं । ५० वटा शाखा र ६५० कर्मचारी छन् । त्यो इफोर्टले डेढ वर्षमा शत प्रतिशत व्यवसाय बढाएका हौं । यो भनेको औषत विकास मात्रै हो ।
एक वर्षभित्र अरु विकास बैंकको हाराहारीमा व्यवसाय पुर्याउँछौं । हामी एक वर्षपछि करिब २६ अर्ब हाराहारीको व्यवसाय पुर्याउँछौं । ५० वटा शाखाले मासिक एक करोडको दुईवटा फाइल गर्यो भने एक वर्षमा १२ अर्बको व्यवसाय बढ्छ । अब विदेशी मुद्रा सटहीको सुबिधा पनि लिँदै छौं ।
पहिलो वर्षमा व्यवसाय बढाएसँगै दोश्रो वर्षमा नाफा स्वभिावक रुपमा वृद्धि हुन्छ । तेश्रो वर्षमा सेवा र प्राबिधिमा व्यापक सुधार गर्छाै । व्यवसाय, नाफा, सेवा र प्रबिधिमा सुधार गरेसँगै चौथो वर्षमा टप बैंकका रुपमा स्थापित भैसक्नेछौं । चौथो वर्षमा हामीलाई पछाडी छाड्न अन्य विकास बैंकहरुलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ । आजको दिनमा ज्योति विकास बैंकको सेयर बेच्नेहरु चार वर्षपछि पछुताउने छन् । यतिबेला सेयर किनेर बस्ने मानिसहरु खुसी हुनेछन् ।
प्रतिफल कति पाउँछन लगानी कर्ताले ?
यो वर्ष हामी दुई अंकको प्रतिफल दिने योजनामै छौं । अर्काे वर्षदेखि हामी २० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफलको वृद्धिदर कायम गराउँछौं ।